Zvigayo Zvaishanda — Trip LEE
Pano vamwe vhidhiyo kubva mharidzo ndakaparidza kutanga kwegore rino muSan Diego. Musoro musangano akanga "nepaanogona”, saka ndakasarudza kuparidza pamusoro Romans 12:1-2. Chii chinombodiwa kutarisa zvakaita kuti mutendi ave "akadzingwa?” My huru dzaiva kuti mutendi vanofanira ...
1. Uchadzingwa By Mercy
2. Uchadzingwa Kunamata
Tariro yacho inobatsira!
Nillapoet • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:47 ndiri • pindura
rwendo, nokusingaperi funga kuisa mharidzo enyu ave Podcast?
Janna Howard • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:48 ndiri • pindura
Trip Lee uri muparidzi vakazodzwa, Zvechokwadi Mwari aizokupa chipo. Rumbidzai Mwari vakazodzwa uye anozvininipisa munin'ina wedu muna Kristu! Ndinokutendai nokuti kuparidza nokudzidzisa shoko. pfungwa dzenyu pamusoro “Its kwete ini uye Jesu tiri mhuri,” aingova zvandaifanira kunzwa. Ndatenda. Kurarama mukoma wako chipo, tiri kukunamatira!
Steve Waters • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:48 ndiri • pindura
mharidzo yakanaka, vachida kunzwa zvakawanda wavo. Mwari ngaave nokubwinya
Yelowtail7 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:48 ndiri • pindura
Thanks chokuita … Ndichava pokushanyirazve mubhuku raVaRoma.
Mika • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:48 ndiri • pindura
shoko rechokwadi! wazviita
Jennifer Muvavarirwa • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:49 ndiri • pindura
OH Snap! Ndiudze sei mumwe wangu vatungamiriri vechidiki akandikumbira kutanga kuenda kuburikidza mubhuku raVaRoma naye!! uye btw, iwe taura VERRRYYY ZVIMWE, kwenyu chikomborero :)
Jordwins Winslade • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:49 ndiri • pindura
Tinotenda kuti kugoverana murume uyu! Ndave kuona yakawanda chii pawaivaverengera, chokutanga ruoko… uye saka shoko Kushandurwa musazvifananidze chaizvo anotaura neni pandinenge ndiri pa! P.s- Ndinoda chokwadi akaratidza kuburikidza mumhanzi yenyu… nguva dzose saka zvinozorodza! :)
Dria Elleohvee • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:49 ndiri • pindura
Ndinokutendai soo zvikuru Sir. Izvi chaizvoizvo akandibatsira sezvinoita zvokutamba ndaingotaura ndichinyengetera kuna Mwari iye chete kupa kuti ndive budiriro kudaro zvemarudzi kana ndinzwirei chinhu. Nokuti kare pezvizuva Ndinogona kutaura nokutendeseka kuti dzandakamboenda feelin madd mwoyo; kwete kuda kubuda pamubhedha kuenda kukirasi, kana Ndinoenda kuchechi handina kunzwa kuti uye whatnot asi ichi mangwanani I paakamuka vainzwa vanozorodzwa uye aiva zuva guru mukirasi ndakabva kumba uye akaona Video yako. Handina kunyange kukuzivai waiva Blog.
Ndinotenda Mwari kuti ushumiri hwako. Ndinofanira kuwana iwe munharaunda yangu, kuchechi yangu kana chinhu.
Ndatenda, rudo ruzhinji!!
Jade Mahouna • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:50 ndiri • pindura
ndinorarama pana kuFrance uye ini dont kunzwisisa kana aunoparidza ,nekuti handina kutaura uye kunzwisisa english.can iwe kushandura mu French ndapota
BRAVEHEART • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:50 ndiri • pindura
Good basa Trip…Ndinotenda Mwari kuti Positioning iwe uri kupi panguva, inotibatsira uye anotikurudzira. Good basa kamwe zvakare